गर्मीमा दाँतको सुरक्षा कसरी गर्ने ?
चिसो पेय पदार्थ सेवन गर्दा के के कुरामा ध्यान दिने ?
✍️: टिभी अन्नपूर्ण	 🕒 प्रकाशित: २०७८ बैशाख ७, मंगलवार १६:५०
गर्मी मौसम सुरु भएसँगै बजारमा विभिन्न किसिमका पेय पदार्थहरूको उपभोग आकासिने गर्छ । पेय पदार्थमा पनि दूध, लस्सी जस्ता हल्का पेय पदार्थ (सफ्ट ड्रिङ्स) भन्दा पनि कार्बोनिक एसिडयुक्त चिसो पेय पदार्थ बढी उपभोग हुने गरेको पाइन्छ । तर ती पेय पदार्थ कसरी पिउने र कति पिउने त ? दन्त चिकित्सकहरु भने चिसो पेय पदार्थलाई जति सक्दो कम उपभोग गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका दाँत तथा मुख स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख डा। प्रकाश बुढाथोकी दाँत तथा मुखको सुरक्षाको लागि सकेसम्म चिसो पेय पदार्थ पिउनै नहुने बताउँछन् । बजारमा आउने कोल्ड ड्रिङ्क्समा कार्बोनिक एसिड मिसाइएको हुन्छ । ‘यसलाई गिलास वा अन्य भाँडामा खन्याउँदा फिँज आउने कारण पनि यही कार्बोनिक एसिड हो ।’ बुढाथोकीले भने ‘कार्बोनिक एसिडले दाँतको इनामेलाई खियाउने काम गर्छ । यसले गर्दा पछि दन्त सडन हुने र गिजाले ठाउँ छाड्ने गर्छ ।’ त्यसमाथि गुलियो चिज पनि मिसाएका कारण यो दाँत तथा मुखको सुरक्षाको लागि उपयुक्त नहुने उनी बताउँछन् ।
चिसो पेय पदार्थ पिउनै परे यसलाई पाइपको माध्यमबाट पिएर सिधै निल्ने गरी पिउनुपर्ने दन्त चिकित्सकहरु बताउँछन् । चिसो पेय पदार्थ खाने बेलामा मुखमा धेरैबेर उक्त पेय पदार्थ राख्न नहुने र पेय पदार्थ पिइसकेपछि सफा पानीले मुख कुल्ला गर्नुपर्छ । जसले गर्दा दाँतलाई समस्या गराउने कार्बोनिक एसिड दाँतमा बस्न पाउँदैन । यसले गिजामा समेत समस्या गर्छ ।